विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली टिम घोषणा, को-को छानिए ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली टिम घोषणा, को-को छानिए ?
अशोज ३ गते, २०७५ - १०:२३
मलेशियामा हुने छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’मा छ । नेपालको समूहमा चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भूटान, सिङ्गापुर र मलेशिया रहेका छन् ।नेपालले पहिलो खेल असोज १७ गते म्यानमारसँग खेल्नेछ । दोस्रो खेल २० गते मलेशियासँग, २१ गते थाइल्याण्डसँग, २४ गते चीनसँग र २६ गते सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ । रासस
अशोज ३ गते, २०७५ - १०:२३ मा प्रकाशित